धुर्मुसले नारायणी पुलबाट हामफाले आखिर किन ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
धुर्मुसले नारायणी पुलबाट हामफाले आखिर किन ?
चर्चित कलाकार तथा समाजवसेवी सिताराम कट्टेल र्धुमुसले चितवनको नारायणी पुलबाट हामफालेर आत्महत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । नेपाली चलिचित ‘म त मर्छु की क्या हो’ मा उनले हामफालेको सिन सार्वजनिक भएको हो ।
‘मेरी बास्सै’बाट चर्चित बनेका सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुन्जना घिमिरे (सुन्तली)को लेखन तथा निर्देशनमा यो चलचित निर्माण भएको हो ।
चितवनको विभिन्न क्षेत्रहरुमा सुटिङ गरिएको यो चलिचितको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । त्यही ट्रेलरको अन्त्यमा धुर्मुसले चितवनको नारायणी नदिबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेको देखाइएको छ ।
पारिवारी र व्यवसायीक तनावका कारण सहनै नसकि धुमुर्सले आत्महत्या गरेको उक्त भिडियोमा देख्न सकिन्छ । यो चलचितको निर्देशन धुर्मुस सुन्तली आफैले गरेका छन् ।
श्रीमानले घर व्यवहार चलाउन नसकेको भन्दै पहिला सुन्तलीले आत्महत्या गर्न खोजेकी थिइन् । श्रीमतीलाई सम्झाई बुझाई गरेको धुर्मुसले पछि आफैले हाम फालिदिएको दृष्य ट्रेलरमा देख्न सकिन्छ ।
चितवनमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिरहेका उनीहरुको टीमले यो चलिचित्र बनाएका छन् । देश विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सानो-सानो सहयोगले निर्माण हुन लागेको रङ्गशालालाई केही आर्थिक सहयोग होस् भन्ने हेतुले यो चलचित्र निर्माण गरिएको हो । उक्त भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नहोस् ।मोटिभेट न्यूजबाट